UVA Parts (RC Model ụgbọelu)
Arịrịọ maka a Quote
Huisheng Smart Tech bụ a nkenke hardware machining ụlọ ọrụ na aha nke elu àgwà na ikike na-emepụta mgbagwoju machined akụkụ na nnọọ mma uru. Dị na Shenzhen nke China, dị ka ndị enyemaka nke Kai Da Feng webatara Company nke Guzosie Ike na 2007.
anyị ụlọ ọrụ nwere 140 elu-nkenke CNC mbịne lath igwe, 130 elu-nkenke CNC-egwe ọka lath igwe na ihe karịrị 350 elu equipments, na-onwem na cubic mmewere na quadratic mmewere anwale equipments.Our ụlọ ọrụ nwere ihe karịrị 400 ndị ọrụ na mmepụta ebe karịa 10,000 square mita, kwa afọ ahịa ego dị nso ka nde 150 yuan.
N'agbanyeghị akụkụ na mfe ma ọ bụ mgbagwoju Ọdịdị, anyị pụrụ ime ka ọ dị ka kwa ahịa akụkụ imewe ma ọ bụ sample, CNC-egwe ọka ndidi nwere ike iru 0.05mm. Anyị nwere ike izute mkpa nke dị iche iche ahịa maka nkenke ahaziri CNC machined akụkụ.
N'ime 400 ukwuu zụọ ọrụ Nlụpụta nkenke akụkụ ya nke ọma.
Anyị emewo iji jiri ihe karịrị 400 mkpara. Incorporating Ụgha na machining noo 10000 square mita, niile onwem na ọhụrụ technology.
HS smart ekewapụ ya ọgwụ, ọla ma na-abụghị leaded ọla ụlọ ọrụ.
HS smart bụ ISO 9001, ISO1400and IATF16949 gbaara.
GD ógbè erube nkwekọrịta na kaadị enterprise
National elu-tech enterprise
National mmekọ ọhụrụ nlereanya patent 8 ihe
anyị kwa izu ala